Post by Admin, Aug 1, 2021.
HARGEYSA – [TELESOM] – Shirkadda Laydhka Telesom ee Telesom Electric Company (TEC) ayaa maanta daah-furtay mashruuc lagu horumarinayo laydhka caasimadda ee magaalada Hargeysa. Mashruucan ayaa waxaa xadhkaha laydhka ee shirkadda la marin doonaa dhulka hoostiisa, iyadoo laga soo qaadi doono dhamaan xarumaha laydhka ee ay shirkaddu ku leedahay dalka.
Munaasibadan lagu daah-furaayey mashruucan oo ay ka soo qayb-galeen madax iyo masuuliyiin ka kala socday dawladda, shirkaddaha laydhka iyo ganacsato kale ayaa ka dhacday huteel Maansoor ee magaalada Hargeysa.
Guddoomiyaha shirkadda laydhka ee TEC Eng. Muuse Cali Cige ayaa ka waramay mashuurcan qiimaha uu u leeyahay bulshada, lacagta ku bixi doonta iyo muddada uu socon doono. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale si gaar ah ugu mahadnaqay komishanka cusub ee Tamarta Somaliland.
Halkan ka daawo khudbadihii kala duwanaa ee laga jeediyey shirkan:
Telesom oo Haamo ku Wareejisay Maamulka Gobolka Togdheer
Shirkada korontada ee Telesom ayaa Daah-furtay mashruuca Tamarta Cadceeda laga dhalinayo.
Telesom oo Biriish ka dhistay Xaafada Maxamed Mooge iyo Gol-barwaayo ee magaaladda Hargeysa
Telesom oo Qalabka barashada diinta Islaamka ku wareejisey Xabsiga Mandheera